ओलीका नारदको इतिश्रीले ल्याएको राजनीतिक तरङ्ग - Entertainment News Nepal - Celebrity News & Gossips
नयाँ नेपालका शक्तिशाली ओली महाराजको नारद, गोकुल बास्कोटाको राजनीतिक सिम्हासनको इतिश्री भएको छ । उनको जीवनको अत्यन्तै घृणित तथा देश-विदेशमा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरु कतिसम्म गिरेर कुरा गर्छन भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण दिएको छ, गोकुल काण्डले । तर यो नयाँ काण्ड भने होइन ।
इतिहासको कालखण्डमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको बदनियतले कांग्रेसलाई सखाप पारेको छ । त्यो नियतको चरम पराकाष्टका रुपमा शेरवहादुर देउवा चित्रित छन् । यो दृष्टान्त यहाँ किन आवश्यक पर्यो भने कांग्रेस आफू पवित्र हुनुपर्छ अरुलाई खोट लगाउनका लागि । त्यो हैसियतमा कांग्रेस नेत्रित्व छैन । उसो भए को छ त ? स्वतन्त्र नेपाली नागरिकहरु र पार्टी भित्रका देशप्रेमीहरु । के पार्टीभित्र स्वतन्त्र देशका लागि माया गर्ने नागरिकहरु छैनन् ? छन, तर कांग्रसभित्र गगन थापा जस्ताको आवाज कस्ले सुन्ने, अनि पूर्व एमालेमा भिम रावलको ? माओवादीको त कुरै छोडौँ, यिनीहरुलाई पहिले मान्छे मार्न र अहिले लुट्न बाहेक के नै आउँछ र त्यो पनि पुरै बंश लागेर, प्रचण्ड परिवार लाई हेरौ !!!
एकताका गिरिजाबावु प्रधानमन्त्री हुदा केपी ओली उप-प्रधानमन्त्री थिए । त्यतिबेला गिरिजाले जे भन्यो, यिनले त्यसमा ‘हो मा हो’ मिलाउथे, र कतिपय एमाले कार्यकर्ताले भन्थे ओली कांग्रेस भइसक्यो भनेर । नेपालको राजनीतिमा गिरिजाप्रसादलाई सिंहका रुपमा कांग्रेसले दर्ज गराएपनि देशका लागि भने यिनले कहिल्यै राम्रो काम गरेनन । ज्ञानेन्दको सत्ताप्रतिको चरम मोह र दरबार हत्याकाण्डमा ज्ञानेन्द्रलाई गिरिजाले भन्ने ग्राण्ड डिजाइनको लुकामारीमा भएको शान्ति सम्झौता नवराजाहरुका लागि लुट्ने ठाँउ बन्यो । त्यो बार्ताले देशमा द्वन्द त अन्त्य गर्यो तर उपलब्दि केहि गरेन । साधु नेता सुशिल कोइरालाले संविधान जारी गरिदिए । भारतले नाकाबन्दी लगायो । ओलिले भारतको विरोध गरेर आफूलाई राष्ट्रवादी भएको घोषित गरिदिए ।
"ओलिका नारदका रुपमा कार्यरत थिए गोकुल । सर्वशक्तिमान महाराजका नारदलाई कस्ले छुने ? कमेडी च्याम्पियन्सका सुमन कोइरालाको (दले दाई) भनाई 'सरकारलाई हेप्नी' भन्ने वाक्यको थर्कमान शैलीको अभियन्ता थिए यिनी । गोकुल यतिसम्म पतन भइसके कि यिनले बोल्दा के सभ्य तथा के असभ्य भन्ने कुरा बिर्से । ७२ करोडको खुलमखुल्ला डिल गर्ने ओलीभक्त्त गोकुलले अरुलाई बोल्ने तमिज सिकाउथे । तर यिनी गाली गर्दा उच्चारण गरिने 'मु' शब्द प्रयोग गर्न माहिर रहेछन । नेकपाका केहि कार्यकर्ताहरुले ठाडो नाक बनाउदै हाम्रा नेताले नैतिकताको आधारमा राजिनामा गरे र हामीले गच्छेदारको लागि कांग्रेसले जस्तो गरि कार्यकर्ता सडकमा परिचालन गरेनौ भने । तर के गोकुलले नैतिकताका आधारमा राजिनामा गरेका हुन ? होइनन, गोकुल नैतिकता पतन भई भ्रष्टचारमा मुछिएका एक अश्लिल र देश लुट्ने लुटेरा हुन ।"
माधव कुमार नेपाल र झलनाथको पालोसम्म पूर्व एमालेमा एउटा सानो झुण्ड बोकेको ओली सर्वशक्तिमान पार्टी अध्यक्ष हुनेछन भन्ने यी दुवैलाई हेक्का समेत थिएन । ओलीका पथप्रदसक गिरिजा हुन भन्नेमा शंका छैन । गिरिजाले मिरिजा दिलशाद वेग लाई संसदको पगरी भिराएर कांग्रेसमा गुण्डाराजको वर्चस्व छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गरिदिए, पछि मिरिजालाई छोटे राजनले मारे । मिरिजाको पहुच कुख्यात भारतीय गुन्डा दाउद सम्म रहेको बताईएको छ । त्यसैगरी, गिरिजाले नै गुण्डा बवन सिंहलाई क्लिन चिट दिएर संसद भवन छिराइदिए । ठ्याक्कै त्यही पारामा, ओलीले महेश बस्नेत, चरी, परसुराम बस्नेतलाई काँखी च्याँपे । युवा संघ नेपाल जसलाई वाई. सि. एल. नेपालको 'काउण्टर अट्याक' गर्न पूर्व एमालेले खडा गरेको थियो, त्यसलाई चलाउने खेलको नेतृत्व ओलीले लिए । युवा शक्तिलाई हातमा लिएपछि यिनले आफूले सिकेको कलाको प्रयोग राम्रैसित गरे । त्यसको फलस्वरुप: ओली सर्वशक्तिमान नेताको रुपमा परिचित छन नेपाल राज्यमा । तर सत्ता र शक्ति सधै रहदैन । पूर्व एमालेका माधव नेपाल, भिम रावल तथा झलनाथ खनाल मिले भने ओलीलाई केही हदसम्म लोप्पा खुवाउन सक्छन् । नैतिक पूर्व एमालेको झुण्डले ओलीलाई प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षको रुपमा अन्तिम जन्मदिन मनाउने अवस्थामा पुर्याउन जरुरी छ । ओलीसँग नैतिकता छैन नै, अझ भनौ नेपालका केही नेताहरु बाहेक सबै पत्तुर नै छन भन्दा फरक नपर्ला । को कति कम र को कति बढि भन्ने मात्र हो ।
ओलिका नारदका रुपमा कार्यरत थिए गोकुल । सर्वशक्तिमान महाराजका नारदलाई कस्ले छुने ? कमेडी च्याम्पियन्सका सुमन कोइरालाको (दले दाई) भनाई 'सरकारलाई हेप्नी' भन्ने वाक्यको थर्कमान शैलीको अभियन्ता थिए यिनी । गोकुल यतिसम्म पतन भइसके कि यिनले बोल्दा के सभ्य तथा के असभ्य भन्ने कुरा बिर्से । ७२ करोडको खुलमखुल्ला डिल गर्ने ओलीभक्त्त गोकुलले अरुलाई बोल्ने तमिज सिकाउथे । तर यिनी गाली गर्दा उच्चारण गरिने 'मु' शब्द प्रयोग गर्न माहिर रहेछन । नेकपाका केहि कार्यकर्ताहरुले ठाडो नाक बनाउदै हाम्रा नेताले नैतिकताको आधारमा राजिनामा गरे र हामीले गच्छेदारको लागि कांग्रेसले जस्तो गरि कार्यकर्ता सडकमा परिचालन गरेनौ भने । तर के गोकुलले नैतिकताका आधारमा राजिनामा गरेका हुन ? होइनन, गोकुल नैतिकता पतन भई भ्रष्टचारमा मुछिएका एक अश्लिल र देश लुट्ने लुटेरा हुन ।
ओली महाराज कि जय भन्ने कार्यकर्ताहरुको चुरिफुरी अहिले शिर ठाडो पार्ने हैसियतमा छैन, केहि नैतिकता भएका कार्यकर्ताहरुमा । अनैतिक तथा गुण्डाराज चलाउने कार्यकर्ता कहिले नैतिक थिए र यिनीहरुबाट नैतिकताको आश राख्नु ?
प्रम ओलीले गोकुलको उक्त कुकृत्य पछि पनि आफ्ना नारदको प्रसंशा गर्न पछि परेका छैनन । यो ओलीको धतराष्ट्र शैली जुन देखेर-सुनेर पनि वुझ पचाए जस्तो, बुझेर पनि नबुझेजस्तो गर्ने अवस्थाले ओली मानसिक रुपले ठिक छन् भन्ने कुराको प्रश्न उठ्छ ? ओली ज्यू, अब त अति भयो ? छि:, कस्तो बेसरम प्रधानमन्त्री ? पटक पटक मृत्युशैया (अपरेसन) को मुखमा पुगेर बाचेका तपाईमा नैतिकता त के, मानविय संवेदना समेत रहेनछ । देशको ढुकुटी बारम्बार रित्याएर देशले तपाईलाई बचाइरहेका छ तर बचाउनु के का लागि ? देश लुट्न, अश्लिल तथा गुण्डाराजको हावी राष्ट्रिय राजनीतिमा गराउनका लागि ?
हो, पूर्व एमालेमा माधव नेपाललाई नैतिक नेताको रुपमा चित्रण गर्न सकिन्छ । उनले आफ्नो पार्टीले चुनाव हारेको भरमा विवेक पुर्याएर पार्टी अध्यक्षबाट राजिनामा दिए । आफ्नो पार्टीको सर्वाधिक ठूलो पद त्याग गरि पार्टीलाई बचाए । तर अहिले ओलीको हर्कतले उनी (गरीव देशका प्रधानमन्त्रीले राज्यको दोहन गरी करौडौ खर्च गरेर जन्मदिन मनाउने) कम्युनिष्ट होइनन भन्ने प्रस्ट पार्छ । त्यत्रो पैसा खर्च गर्न गर्न संविधानको कुनचाँही धाराले दियो ? सामान्य नागरिकको विहेमा, तिहारमा भैलो मा पैसा तोक्ने सरकारको यो रवैया कताबाट कम्युनिष्ट हुन्छ ? पहिले पहिले गाली गर्दा 'तेरो घरमा कांगे्रस पसोस भनिन्थ्यो' भने अहिले 'कम्युनिष्ट पसोस भनि कसैको परिवारलाई भन्नु सराप दिनु जत्तिकै' भएको छ । जंगलबाट सोझा-साझा नागरिकलाई हक अधिकारका लागि लडेका भनिएका तथा मजदुर किसानका लागि लडेका पार्टी एकत्रित भई चरम लुट मच्याएको जगजाहेर छ । यसको बिरोध गर्ने हैसियतमा प्रतिपक्षका सभापति छैनन्, गगनले कहिलेकहिँ गनगन गर्छन । अरुको आवाज शुन्य ? के नेपालका मानवअधिकारर्मी तथा नागरिक समाजको हैसियत स्खलित भएको हो?
कांग्रेस भित्र ज्ञानेन्द्रले असक्षम भनि लात मारेका शेरबहादुरले माओवादी आफ्नो पार्टीमा पसाउदा कांग्रेसका सदस्यहरुले आफ्नो सभापतिको बिरोध गरि माओवादीलाई पाखा लगाउन नसक्नुले कांग्रेसले नराम्रो हार बेहोर्नुपर्यो । अर्को मुख्य कुरा, कति बर्ष सम्म एकजना मान्छे पार्टीको सभापति पदमा रहिरहने? दुई पटक भन्दा बढी महाधिवेसनमा सभापति तथा उपसभापति पदमा लड्न नपाउने, यदि महाधिवेसन गर्न सकिएन भने अत्याधिक अवधि ५ वर्ष तोक्ने गरिएमा देउवा, ओली तथा प्रचण्डको बन्शिये शासनबाट देशले मुक्त पाउथ्यो । देउवा, ओली तथा प्रचण्डको अवधि सिद्दिसकेको छ । पहिले पार्टीभित्र लडौ, अनि अर्का पार्टी सँग । यहाँ त अरु देशले भन्दा आफ्नै देशका राजनीतिक दलालले देश खान आटिसके । खाने भनेको देशलाई निल्ले होइन, देशलाई चरम गरीवीमा पुर्याई जनाताको अधिकार खोस्ने हो ।
एमालेका नैतिकवान नेताहरुमा ओलीलाई पाखा लगाउने जिम्मेवारी थपिएको छ । ओलीले सिमा नाघिसके । ओलीको उखानटुक्काको अन्त्यसँगै एमालेले नैतिक तथा निष्ठावान नेत्रित्व पाओस, त्यसमा माओवादी अटाउने नअटाउने उसको खुसी । किनकि माओबादी बिनाको एमाले अलि बढी चरित्रबान थियो कि ? होइन भने कहिले ओली जालान र आफुले पार्टीको नेतृत्व गर्न पाउला भनि बसेका प्रचण्डलेको तल माधव, झलनाथ बस्नु कत्तिको सान्दर्भिक हुन्छ, सोचौ?
ओलीले नाकाबन्दीका बेला मुखले नाकाबन्दी हो भन्ने शिवाय अरु कुनै गतिलो काम गरका छैनन् । यिनलाई अहिले सहयोग गर्न डा युबराज खतिवडाले आम सर्वसाधरण माथि करको भारी निरन्तर थपिरहेका छन । राष्ट्रियता भनेको राष्ट्रप्रति बफादार हुनु हो । राष्ट्रलाई नै लुट्नु होइन । मुखमा राम-राम बगलीमा छुरा बोकेका ओली महाराजलाई प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापतिबाट विदा गरोस, शुभकामना । अजम्बरी कोही हुदैन, सुरुवात पछिको अन्त्य अकाट्य सत्य हो । राष्ट्रवादी आशसहित शुभारम्भ गरिएको शक्तिसाली ओली राष्ट्र भष्ट्रचार तथा लुटपाटमा अत्यन्तै सक्रिय छ । यस्तो व्यवस्था फाल्नका लागि पार्टी भित्र तथा पार्टी बाहिरबाट देशका नागरिकहरु एकजुट भइ नब ज्ञानेन्द्र (ओली महाराजको) को शासनको अन्त्य गरौँ । जय देश, जय जन्मभूमि, जय नेपाली जनता !!!
किताब लगाइएको करको विरोध गर्ने विद्यार्थीहरू पक्राउ
शिशु च्यापेकी महिलामाथि लाठी बर्साउने इन्स्पेक्टरमाथी छानबिन
तीन देशमा किन प्रतिबन्ध लगाइयो अक्षय कुमारको बेलबटम, यस्तो...
eNewsnepal Aug 21, 2021
जब लुटेराको समूहले अभिनेत्री अलंकृतालाई बाथरुममा बन्धक...
eNewsnepal Sep 9, 2021